Guardiola: Waligey kama horimaan kooxda sida Napoli oo kale ah – Gool FM
Guardiola: Waligey kama horimaan kooxda sida Napoli oo kale ah
(Manchester) 18 Oct 2017. Manchester City waxa ay ku badisy 2-1 kulankii xalay ee Napoli, balse Guardiola waxa uu la tacajabay tababbare Maurizio Sarri “Ciyaaryahan ahaan iyo tababbare”.
Guardiola waxa uu qiray in uusan waligii ka horimaan koox la mida Napoli.
City ayaa awoodda sare lahayd 30kii daqiiqo ee hore waxa ayna ciyaarta geeyeen 2-0 balse rikoore laga qabtay Dries Mertens iyo mid uu dhaliyey Amadou Diawara ayaa ciyaarta xiiso dambe u yeelay.
“Dhib waan filayey. Waxa ay ahayd ciyaar aan fileymay, in ay baasas gaagab dhiibaan, aad noo raacdaan, xaqiiqdii aad u sareysa, “ ayuu Guardiola u sheegay Mediaset Premium isaga oo cajiib ku tilmaamay tababbaraha reer Talyaani hadda iyo ciyaaryahannimadiisii, xiligiisii Brescia iyo Roma.
“Ciyaaryahan ahaan hadana tababbare, waligey kama hor imaan koox Napoli oo kale ah, abid.
“Hadii ay heerkan ku ciyaaraan, markaa meel hore wey tagi karaan. Aad ayaan ugu faanayaa ciyaaryahaneyda, maxaa yeelay waxaan ogahay sida uu bandhigga u adkaa mana muquunin kartid kooxda sida Napoli ah 90ka daqiiqo. Suurtagal ma aha”.
HORDHAC: Chelsea Vs. Roma
Camp Nou oo caawa siyaasadeysan!